5 Best Free Web Hosting Service - .::just for share::.
Home » hosting »5Best Free Web Hosting Service
PHP, HTML တွေကို ကောင်းကောင်း Support လုပ်ပေးပါတယ်။ အလကားရတာဆိုတော့ ဘာပြောပြောတန်ပါတယ်ဗျာ။ လိုချင်တယ်ဆိုရင် http://www.drivehq.com/ မှာ Register လုပ်ပါ။
100 GB Bandwidth ပေးတယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပြောရမှပါပဲ။ သုံးမယ်ဆို http://www.110mb.com/ ကိုသွားပါ။
5 ခုဟာ Beginner တွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
တရုတ်တန်း ကောင်းခန်. October 14, 2013 at 12:59 PM
ကို ဖြိုး October 18, 2013 at 9:21 AM